जिबनशैली Archives - Entertainment Khabar
अहिले हामी स्वस्थ्य जीवनशैलीको खोजीमा छौं । यसमा खानपानको अहंम हिस्सा छ । भनिन्छ, खाना स्वस्थ्यवर्द्धक एवं पोषिलो हुनुपर्छ । तर, त्यती मात्र काफी छैन । खाने तालिका र तरिकाले पनि यसको लागि खास भूमिका खेल्छ । खाना खाने निश्चित तालिका छ । त्यसैगरी खाना खाने खास तरिका पनि छ । यदि तालिका र तरिका मिलाएर खाइयो भने उक्त खाना शरीरमा राम्ररी पच्छ । शरीरले त्यसबाट पोषक तत्व ग्रहण गर्छ । कुरा गरौं, खाना खा...
मंगलबार, भाद्र ०८, २०७८
गर्मी मौसमका लागि उपयुक्त ५ तरकारी, किन खाने ?
गर्मी मौसममा स्वास्थ्यको हिसाबले खानेकुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सोचविचार नगरी जे पनि खानाले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ । गर्मीमा जाडोमा जस्तो पाचनशक्ति बलियो हुँदैन । जे पनि नपच्न सक्छ । त्यसैले पनि खानेकुरामा अत्याधिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अझ हामी नेपालीले बिहान साँझ नै खाइने तरकारीमा त विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गर्मी मौसमा स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त तरकारीहरु: ...
काठमाडौँ । साहारा ब्युटीहोम मेकअप स्टुडियो ट्रेनीङ सेन्टरको २० औं बार्षिकोत्सब भब्यताको साथ मनाएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि बरिष्ट सौन्दर्यबिदहरु, सौन्दर्यकर्मीहरु, संचारकर्मी तथा कस्टमेटिक ब्यबसायीहरु बीच खुसि तथा शुभकामना साटासाट गरिएको थियो। उक्त अवसरमा साहारा ब्युटीहोम मेकअप स्टुडियो ट्रेनीङ सेन्टरकि संचालिका सौन्दर्यकर्मी रचना शाक्यले बिगत २ दशक देखि सौन्दर्य क्षेत्रमा अतुलनिय योग...
धेरै मानिस आफ्नो बढ्दो तौलका कारण तनावमा हुन्छन् र यसलाई कम गर्नका लागि विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन् । तर थोरैलाई मात्रै थाहा छ कि डाइटमा थोरै परिवर्तन गरेर निकै सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ । केही फलफूल र सागसब्जीले प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै तौल पनि नियन्त्रणमा राख्छ । यदि तपाईं आफ्नो तौल कम गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ भने डाइटमा यी फलफूल र सागसब्जी समावेश गर्नुहोस् । खरबुजाः गर्मीमा खरबुजा ...
मंगलबार, आषाढ २९, २०७८
काठमाडौं-आँखावरिपरि काँचो आलुको टुक्राले मसाज गर्दा कालो घेरा कम हुँदै जान्छ ।पर्याप्त मात्रामा निद्राको कमी, कामको चाप र अत्यधिक तनावका कारण आँखामा डार्क सर्कल ९कालो घेरा० देखा पर्छ, जसले हाम्रो सौन्दर्यमै ह्रास ल्याइदिन्छ । केही खानेकुराको सेवनबाट डार्क सर्कलबाट बच्न सकिन्छ । खासगरी, भिटामिनको कारणले आँखावरिपरि डार्क सर्कल देखा पर्ने गर्छ । अब जानौँ डार्क सर्कल हटाउने केही उपाय भिटामिन ‘...
मंगलबार, आषाढ १५, २०७८
निजी कम्पनीहरुको आगमनसँगै अहिले अन्तरिक्षमा यानहरुको आवागमन पनि बढिरहेको छ । यो सँगै पृथ्वीको कक्षबाट अन्तरिक्ष फोहोरको रुपमा स्याटेलाइटका टुक्रा, यान तथा स्पेस स्टेसनका फोहोरका टुक्राहरु समेत पृथ्वीमा खस्ने क्रम बढ्नेछ । हालै २० हजार किलो तौल भएको चिनियाँ स्याटेलाइटको भिमकाय टुक्रा अनियन्त्रित भएर माल्दिभ्स नजिकैको हिन्द महासागरमा खस्यो । यसअघि सन् २०२० को मे महिनामा पनि चीनको एक अर्को रकेट पनि अ...
एजेन्सी । तेह्र वर्षका साहिल शाह गतवर्ष नोभेम्बरमा कोरोना संक्रमित भएका थिए । त्यसपछि उनलाई कुनै पनि गन्ध आउन छोड्यो । उनका आमाबाबु बच्चाको समस्या समाधानका लागि धेरै तिर दौडिए । महिनौंसम्म साहिलको यो समस्या समाधान भएन । दिक्क मान्दै साहिलको परिवार उनीहरुले एकजनासँग परामर्श लिए जोसँग उनीहरुको कुनै आशा नै थिएन । साहिलका बाबु प्रतीक शाहले एकजना आफन्तको सुझावमा उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कको एक गन्ध वि...
निषेधाज्ञामा के गर्दैछन् कलाकार ?
नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दर तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । संक्रमण बढेसँगै सरकारले बैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो, एकिन छैन । पहिलो चरणको लकडाउन सकिएसँगै विस्तारै लयमा फर्किन थालेको मनोरञ्जन क्षेत्र फेरि थला परेको छ । यसले, नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका कलाकर्मीलाई पनि असर परेको छ । घरमै निषेधाज्ञाको पालना गरेर बसेका केही कलाकर्मीसँग हामीले...
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश औषधि पसलहरुमा अहिले सबैभन्दा बढी बिक्री हुने औषधि भनेको भिटामिन सी र भिटामिन डी हो । कोरोनासँग लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युन सिस्टम) बलियो बनाउने भन्दै अहिले भिटामिन सी र भिटामिन डीको अत्यधिक बिक्री, वितरण र प्रयोग भइरहेको छ । तर, चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावी भिटामिन डीको प्रयोग गर्दा यसले हड्डी दुखाउनेदेखि मिर्गौला ड्यामेज गर्नेसम्मको असर गर्ने चिकित्सकले चेतावन...
सिन्धुपाल्चोककी १९ वर्षीया मिना थापा (नाम परिवर्तन)को महिनावारी रोकिएको केही समयपछि नै तल्लो पेट धेरै दुख्न थाल्यो । दुखाइ खप्न नसकेपछि उनी उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पुगिन् । अस्पताल आउने बेलासम्म उनलाई पेटमा गर्भ छ भन्ने थाहा थिएन । उनको भिडियो एक्सरेलगायतका अन्य परीक्षण गर्दा डिम्बबाहिनी नलीमा गर्भ बसेर नली फुटेको देखियो । त्यही नली फुटेर पेटको दुखाइ भएका कारण धुलिखेल अस्पतालमा शल्यक्रियामार्...